ReactOS 0.4.0: vhezheni itsva yeakavhurika sosi Windows clone | Linux Vakapindwa muropa
ReactOS 0.4.0: vhezheni itsva yeakavhurika sosi Windows clone
ReactOS (React Inoshanda Sisitimu) yakavhurika sosi inoshanda sisitimu nerutsigiro rweMicrosoft Windows NT 5.x kuenderera mberi kunyorera uye madhiraivha, ndokuti, inowirirana neWindows XP uye neshanduro dzapashure dzeMicrosoft system Yakagadzirwa ichishandisa rejini mainjiniya yechigadzirwa cheMicrosoft kuti uone mashandiro ayo uye kugadzira yakavhurika sosi dombo, kunyangwe hazvo yakatanga kugadzirwa kutsvaga kusangana neWindows 95, kunyangwe zvishoma nezvishoma zvachinja.
Iyo ReactOS chirongwa chakanyorwa muC kunyanya, uye chakavezwa kune zvigadzirwa x86, AMD64 uye ARM kuitira kuti Windows API dombo igone kushanda pane mamwe michina. Uye sekuda kuziva, kutaura kuti ReactOS ine zvakawanda zvekuita neWine, sezvo zvichitora zvikamu zveichi chirongwa kuti chishande zvakanaka. Uye kunyangwe paine zvirevo zvevagadziri vaviri vaiti vakashandisa mafaira ekutanga eMicrosoft uye vakabvarura kodhi yemisangano yeWindows, chirongwa ichi chakaramba chichienderera mberi pamberi pekunyepedzera kwakadai.
Asi usakanganisa ReactOS haisi kugoverwa kweLinuxIyi purojekiti haina Linux kernel, asi iyo inoshanda system kernel ndeyekutanga zvachose uye yakagadzirwa kubva pakutanga kwechirongwa ichi. Zvino, mushambadzi Ziliang Guo akazivisa kuti yakagadzirira kurodha ReactOS 0.4.0, rimwe danho kumberi kwesisitimu iyi uye inounza kuwanda kwakawanda pamusoro peshanduro dzakapfuura.
Kumwe kwekuvandudza ndiko rutsigiro rweNTFS systemystem, kunyangwe ichigona zvakare kuverenga nekunyora kune ETX2 zvikamu. Tsigiro yemisoro mitsva yemuongorori uye system shell, rutsigiro rweSATA, rutsigiro rwekuvandudza ruzha, rutsigiro rwekuvandudza USB uye Wireless, pamwe nerutsigiro rweVirtualBox uye VirtualPC software. Tsigiro yeVisual C ++ ine CMake, GCC, WinDBG, rutsigiro rwe16-bit DOS kunyorera, nezvimwewo zvakawedzerwa.
Imwe yakanaka sarudzo kana iwe uchida kushandisa Windows software pane yemahara system ... Dhawunirodha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » ReactOS 0.4.0: vhezheni itsva yeakavhurika sosi Windows clone
Albert kuenderana nemamwe mazita akadaro
Ndinoda kuti iwe utaure nezve IPTABLES muLinux kune inotevera posvo mune ino blog yandave ndichitevera munguva pfupi yapfuura uye ndopa mimwe mienzaniso yezvinyorwa zve iptables zvekuchengetedzwa kwenzvimbo dzekushandira dzeLinux uye maseva eLinux.Ndatenda zvikuru. Ramba uchienda
Mhoro, saka mira neblog pa20 pa11: 00. Chinyorwa chichaburitswa pane icho. Ndinozvitsaurira kwauri ... hahaha
Zvino nei ndichida rakapfava windows ini ndinoshandisa windows uye kana iwe ukashandisa linux shandisa linux asi nei uchishandisa waini shandisa windows
Ndichashanyira blog pa20 pa11: 00 am, iwe une moyo munyoro uye ndinokutenda zvikuru Isaac.
iwe unofanirwa kuitora kuti uone kuti inoshanda sei
kana uine NT chivakwa, hutachiona hunogamuchirwa. Sei tichida imwe windows?
Vulkan 1.0, mutsivi weOpenGL
Maturusi matatu ekuongorora scankit uye Malware muLinux